Diana Rigg - actress British, owadlalela engu-77 e inqwaba izindima abavelele lokho kwamenza ezidumile emhlabeni wonke. Lona wesifazane is owawusekelwe ezikrinini yezithombe Amazing kakhulu, kokuya sasendlini prim, hlola nesibindi, poisoner nabangenasihawu ngisho umka-James Bond. Star, naphezu yobudala bakhe, asiyeki isenzo, ujabula abalandeli ngemisebenzi ezintsha ezithakazelisayo. Yini ngohambo ukuphila kwakhe laziwe?
Diana Rigg: ebuntwaneni
"Umkami Bond" wazalwa ngo-1938 eNingizimu Yorkshire. Abazali wentombazane babe ujantshi unjiniyela kanye wekhaya. Lapho Diana Rigg wayesalokhu usana, umkhaya wathuthela eNdiya, Kwakucatshangwa ahlobene nokwanda umsebenzi sikapapa. Buyela England eyalwiwa eminyakeni 7 ngemuva kwalokho ingane wathunyelwa sokuzivocavoca lomame. Diana ine ubhuti Hugh.
"Izifo" ngokuthi "yaseshashalazini" uye savela amantombazane eneminyaka engu-12, lapho yena nomkhaya wakhe wafika play "Henry the Eighth," esiqintini okuyinto lathathwa Shakespeare nhlekelele. Ngemva konyaka, uDiana Rigg yena wathatha ingxenye in a ukusebenza ezigcawugcawu, ukudlala Sipho. Ukudlala actress abasha umxhwele izilaleli, naye ngokwakhe wazizwa Akungabazeki ukuthi umuntu efuna ukwenza lokho.
Lapho ubheka ikusasa, singasho ukuthi "romance" lalona wesifazane emangalisayo yemidlalo uzoqhubeka kukho konke ukuphila. Kuyo yonke le minyaka, abe nesikhathi sokuba avele ngaphambi izilaleli ngesimo esinjalo abalingiswa ezidumile njengoba Virdzhiniya Vulf, Cleopatra, Medea.
Diana Rigg kwase efakazelwe kakade ngokwabo emibuthanweni waseshashalazini, ukuzama isandla sakhe njengesibonelo lapho wathenjiswa indima ethandwa TV ewuchungechunge "The Avengers", okuyinto wethulwa 1961. Ngo iziqephu lokuqala hlola Emma Ikhasi ukudlalwa omunye actress, kodwa abenzi mafilimu ngokushesha banquma ukulishintsha. Diana wakwazi ukuthola indima, zishaya inqwaba contender. Ukubona i-cool intombazane ejenti, uyakwazi ukuqonda ubugebengu kwakwakhiwa kakhulu futhi ajezise amashinga okhohlisayo, kwaphela iminyaka eminingi ukuthi wakhe "ukushaya ikhadi."
Kwakungisiza bahlanganise impumelelo actress nengxenye nendumezulu mayelana adventures agent abadumile Bond. Tracy - Lalingubani igama Heroine, okwathi ngo-1969 wadlala ifilimu "Ngo Secret Service wakhe seNkosi YaseBrithani 'Diana Rigg. Filmography Star atholwe isinyathelo adventure, lapho wadlala indodakazi Kwabambi nabahamba eHayidese, nomkakhe baba abanesibindi James Bond. Ngokuthakazelisayo, ratio Diana ne umlingisi ababedlala superspy, engazange abe khona, uma ukholelwa ukuthi amahemuhemu.
I izithombe best of iqhaza wakhe
Yiqiniso, lo abanamakhono isilomo asikhumbule izethameli, hhayi kuphela njengoMhlengi Engxenyeni Bond nihlole elinesibindi yesibili. Uneziqu eziningi nezinye izindima yimpumelelo. isithombe abathandwayo adalwe umdlali waseshashalazini kule drama "Inkosi Lear", okuyinto eyaba lithathelwe imisebenzi kaShakespeare. Kulesisithombe ayebhekana lolungenamaphutsa ngendima kokubala Princess Regan, ukulungele akhaphele nababe wakhe-yinkosi ngenxa bazizuzise bona.
indima engavamile kakhulu ngofuzo Diana kule drama "uthando kamama." Wakhe Helena uhlamvu - ke kodwa ngowesifazane okhiphe ilungele ngokuphelele konke ukugcina ukuba iNdodana yakhe ezelwe yodwa, kuhlanganisa ukubulala. Rigg ekholisayo kakhulu ngesimo Queen okubi, kuthwelwe yakhe ifilimu "Snow White."
Kuwufanele ukubukeka kanye mini-uchungechunge "Rebecca", okuyinto futhi liza liphuthuma endaweni ngesiNgisi. Wayengumuntu futhi ubufakazi bokuthi IBamba ithalente ababenolwazi Diana Rigg eseyinsizwa, azizange zinyamalale. Esikhathini "Rebecca" s isithombe ithole isisebenzi sasendlini ozonda umkakhe omusha umnikazi estate lusizi umkayo ubudala, owafa esemncane.
Iqhaza ezinyamazane Tyrell
Njengoba sekushiwo ngenhla, udumo British asiyeki isinyathelo kumafilimu kanye ogawuthola. Abalandeli ungakwazi ukujabulela it in grand TV show "Game of Thrones" isibe inoveli by George RR Martin. Isilomo bajoyine ukuqopha yochungechunge kule sizini yesithathu, ukudlala Deer Tyrell.
Umfelokazi nkosi enamandla, unina indlalifa yayo, ugogo Margery, okuyinto okulinganiswa ngokuthi iNdlovukazi Westeros - kulesi sithombe libonakala zezilaleli ngale teleromane Diana Rigg. "Game of Thrones" uye wavumela ukuba umdlali waphinda ukuqinisekisile ithalente lakhe ngokudlala isalukazi ukugcina ingqondo okubukhali ukuncokola, ngawo kanye elika Indlovukazi Ameva. Heroine wakhe ukusiza umzukulu wakhe othandekayo, bafuna ukushada uyiNkosi, abaphethwe wawuhlukunyezwe eshintshashintshayo.
Diana Rigg kuyinto esifazaneni engibathandayo kwasekuqaleni njalo umsebenzi. It ngokuphelele akazange akuvimbele ukukhandwa lakhe babe amanoveli ambalwa okumatasa ngisho ihlazo, kuhlanganise namadoda ashadile, kanye kabili imishado engokomthetho. Abakhethiweyo lokuqala actress waba umdwebi Israeli, umshado eyathatha iminyaka emithathu. umyeni Okwesibili "sathatha" isikhathi eside, kwaba umkhiqizi yaseshashalazini, nabo inkanyezi eyahlukanisa ngemva kweminyaka engu-8 ngomshado.
Kuphela indodakazi uDiana, yazalwa ngo-1977, igama uRaheli. Le ntombazane lahamba ezinyathelweni kukamama abadumile, ngokukhetha yena IBamba umsebenzi.
Umlingisikazi Rednikova Ekaterina: Biography, Filmography kanye nempilo yakho
Illusionist Dzheyms Rendi: Biography, imiklomelo kanye Nemfundo Isikhwama